Boosaaso: Ammar Laga Soo Saaray Qaadashada Lacagta Shilin Soomaaliga – Goobjoog News
Maamulka Gobolka Bari, kan Boosaaso iyo wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Boosaaso waxay go’aan kaga gaareen isticmaalka lacagta shilin Soomaaliga.
Shirkaan oo saacado qaatay ayaa lagu go’aamiyey arrimo ay kamid yihiin lacagta deegaannada Puntland laga qaadan karo, sarifka lacagaha qalaad iyo arrimo kale oo isla lacagta un ku saabsan.
Waxaa shirkaan laga soo saaray qodobada kala ah:
In maamulka Puntland qaadan doono lacagashada Shilin Soomaaliga gaar ahaan kuwa cusub, lagana tago kuwa go go’an iyo sidoo kale kuwa duugga ah.
Sarifka lacagta waxaa la go’aamiyey Halkii doolar inaan laga badin karin 28-kun oo shilin Soomaali ah.
Sariflayaasha Boosaaso waxaa loo sameynayaa sharci ay ku shaqeeyaan.
Yuusuf Maxamed Wacays Dhedo, guddoomiyaha gobolka Bari oo halkaasi hadal ka jeediyey ayaa sheegay in canshuurta u qaadanayaan oo kaliya lacagta cusub, islamarkaana aanay qaadan doonin lacagihii hore ee Shilinka Soomaaliga ah gaar ahaan kuwooda duugga ah.
“Cid diidi karta lacagta shilin Soomaaliga ma jirto marka laga reebo lacagta aa waqtigeedu u dhamaaday ee aan xitaa la tirin karin, saacadaan laga bilaabo shilin Soomaaliga waa fasax, dadweynaha waxaan u sheegeynaa iney wax ku iibsadaan, dowladana ay Canshuur ku qaadan doonto” ayuu yiri guddoomiyaha.
Guddoomiye Dhedo ayaa dhanka kale sheegay in wixii maanta ka bilowda aanay u aqoonsaneyn sarifle, wuxuuna sheegay in sarifleyda dhammaantood looga baahan yahay iney soo sameytaan aqoonsiyo.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa suuqyada Boosaaso ka jiray jahwareer dhanka lacagta ah, waxaana wax lagu kala iibsanayey oo kaliya lacagta doolarka.
Afey Oo Booqday Xeryaha Dhadhaab
Ufalel vmbgpy Brand name cialis overnight cialis on line
Hffmxm utltgk viagra 100mg cialis on line
Baodlk lmbben Generic cialis sale how to get cialis
lerk jet sildenafil 100mg viagra without seeing a doctor buy...
where to get cialis sample cialis online cialis canada...